Immersive Technology iri kubatsira sei muKukurukurirana - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Augmented Reality, Inonyudza Tech, Mixed Reality, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji, Virtual Reality
Imersive Technology iri kubatsira sei mukutaurirana
Mumakore gumi apfuura, kutaurirana kwedigital kwakachinja nenzira isina akambofungidzira. Kubva pane keypad pad padiki kune iyo flap mobiles, ikozvino isu tiri kurarama munguva yeema smartphones neinobata uye kuita senge maficha. Uye kana uchifunga kuti izvi zvese zvinomira izvozvi saka unogona kunge uchitadza, zvinhu zviri kungotanga kutora imwe nzira. Mumakore makumi matatu anotevera, tinogona kutarisira danho idzva rese rekutaurirana rinozovhura mikova yekutaurirana nekugovana ruzivo nevanhu zviri nyore.
Imersive Technologies inobatsira sei mukutaurirana?
Tekinoroji iri kuwedzera pamwero wepamusoro zvekuti zvakaoma kuti vanhu varambe vachimhanya nayo. Vamwe vanhu vari kushaya kuuya munguva nehunyanzvi asi vamwe vachingovhiringwa nezviri kuitika zviitiko. Makore mashoma apfuura vanhu vakafara zvikuru nekuvhurwa kwe rakapotsa chokwadi yeiyo tekinoroji yemitambo uye mitambo yemavhidhiyo. Uye ikozvino, ndiyo nguva yekufunga nezve izvo zvinochengetwa neVR zvekubatana kwevanhu.
Izvi zvinogona kutaridza sekunyanyisa asi ichi ndicho chokwadi chokwadi. VR iri kuve yakakwira zvakanyanya zvekuti isu tichakwanisa kuiona mune angangoita ese sectors. Izvo hazvina kungogumira kumitambo uye yaita chiratidzo munyika. Pane zvinhu zvakawanda uye zvinotarisirwa zvinoenderana neAR, VR uye MR.
Unoda zvaunoverenga? Wobva watora chimedu chitsva che gutsikana apa.
Kunyangwe Facebook ine chikamu cheVR chakatumidzwa Oculus izvo chaizvo zvakaronga chirongwa chehunyanzvi hutsva Oculus Batanidza Musangano. Iyi tekinoroji inopa kumberi kwemusangano uri kuvandudzwa nemakambani mazhinji ane zvishandiso zvekushandisa, mahedhifoni, mahedhifoni zvichingodaro. Nekudaro, icho chinobata munhu wese kutarisisa yaive pfungwa yavakange vachitarisana nayo - Virtual Reality.
Kune makambani mazhinji ari kushanda kuisa VR uye AR mumasevhisi avo uye zvigadzirwa. Izvi hazvingobatsire chete mukugadzirisa kudyidzana pakati pevanhu zviri nyore asiwo zvinoita kuti chiso-ne-kumeso chitaure mashoma mabhatani kure. Haufanire kusiya imba yako kuti ushamwaridzane nevanhu. Zvakanaka, kune tech-geeks, kana izvi zvikasabata pfungwa dzako zvino chii chichava?
Nekudaro, pane chimwe chinhu chiri kubata pfungwa dzemunhu wese kuVR uye AR mhando yetekinoroji - shanduko yekutaurirana. Iyi nzira yekukurukurirana inobata chakavanzika kune dzakawanda shanduko dzinozove dzakaitika mumunhu pamwe chete nenyika yehunyanzvi. Ichachinja kutaurirana kwe bhizimisi-bhizimisi uye zvichave nemhedzisiro yakakura pane bhizimisi-kutaurirana kwevatengi zvakare. Izvi zvichaita nechokwadi kuti zvibereko uye bhizimisi masevhisi anotorwa kune imwe nhanho itsva.
Iine yazvino yekuwedzera kune tech tech, iyo VR, MR, uye AR ichave nechokwadi chekunongedzera vatengi veumwe neumwe uye wega hupenyu hwehukama ruzivo. Iyi tekinoroji parizvino iri kukwira nevateereri vashoma asi neruoko rwakagadziridzwa pane ruzivo, zvichave nyore kuwana vatengi nekuwedzera.
Ngatitarisei pane ramangwana reiyi VR, MR uye AR nyika pane kutaurirana.
Uyewo Verenga: 6 AR uye VR Statistics inoumba ramangwana re tech
1. Bhizinesi-ku-Bhizinesi Kukurukurirana
Hapana mubvunzo kuti tekinoroji yedhijitari, zvakanyanya kunyanya evanhu vezvenhau ine simba guru pane bhizimisi nyika. Iyo inzira iri nyore yekutaurirana neanoverengeka emabhizinesi uye vangangove vateereri. Yakashandura nzira yekudyidzana pakati pevanhu pamwero wakakura. Nekudaro, zvine musoro zvakanyanya kana VR ikatanga kuchinja kune imwe yeayo evanhu vezvenhau nekuda kwekuzivikanwa kwayo kwepamusoro.
Izvi hazvingoshandure nzira yekudyidzana pakati penharaunda nevanhu asi zvakare zvinoshandura nzira iyo vanhu vari kuita yavo bhizimisi. Iyo inokupa iwe mukana waunokwanisa kutaura nemunhu wese akagara pasi rese nekugara mukamuri imwechete. Iye zvino unogona kuita musangano kana musangano usingaende kunzvimbo dzakasiyana.
Ichakupa ambiance umo zvese bhizimisi vashamwari vanogona kuuya pamwechete kubva kumba kwavo vokurukura bhizimisi mazano. Zvakare, unogona kuvashandura sekuda kwako, tine chokwadi chekuti kumwe kwaungade kuita musangano pakati pesango. Zvakanaka, zvino zvichagoneka.
Uyewo Verenga: 7 AR Shandisa Nyaya dzaungangodaro usingazive
2. Kutaurirana iAset
Kunaka hakusi kwese kana vanhu vachitaura nezvekutaurirana. Iyi tekinoroji yeVR inotarisa mukuita kuti unzwe uri padhuze nevanhu vakakupoteredza. Nemakwikwi akawandisa, hazvizove zvisizvo kutaura kuti munhu akabata sechinhu pane chinhu chakakosha. Iwo makambani haasati ave anotyisa uye nzvimbo huru izvo zviri kuita kuti zvive zvakaoma kuburitsa tarenda revanhu kunze.
Huye, wakamboda here kugara munzvimbo iri nyore kuenda, uchitaura neEECO nezve marongero ebasa kana chirongwa chitsva kunyangwe uine rongedzero. Wese munhu anofanirwa kuve aripo pachinzvimbo chako sezvo iyi yakapfava modhi yakakosha uye yakakosha kunhengo dzechikwata chako.
Inokupa mukana wekugovera pfungwa dzako uye kubatana nechiremera chepamusoro nerubatsiro rweVR. Kwete izvi chete, asi zvinokupa mukana wekuziva mumwe wako nenzira iri nani, shure kwezvose, uri kuita bhizimisi navo. Kana iwe uchida kubata yakabudirira kushambadzira saka hukama manejimendi chinhu chaunoda kushanda pachiri. Ita shuwa kuti iwe uri pane imwechete peji nemutengi wako kana angangoita mutengi.
Uyewo Verenga: VR inoshanda sei? Ziva iyo tech iri kumashure kweVR
3. Bhizinesi-kune-Mutengi Kutaurirana
Nekufambira mberi muVR yepasi mukutaurirana kwedhijitari, iwe unozogona kuona yakawanda shanduko mumunda wekushambadzira. Uye uve nechokwadi nezvazvo kuti VR ichawana kugona kutsva uye ichave yakapararira.
Vatengesi nevashambadzi vanogara vakatsunga kuuya nenzira itsva dzekubatana nevatengi uye kuvanyengetedza kuti vatore chigadzirwa chako. Izvi ndizvo bhizimisi ndezve. Kunyanya kushambadzira kuchaita pauchakwanisa kuona mhinduro yemutengi pane ad. Isocial VR nyika ichaunza mutengi kune imwe nyika itsva yeruzivo, kupindirana uye kunyudza. Iwe unozogona kubatana nevatengi nenzira yakadzama kupfuura yako vhidhiyo mafoni.
Nekudaro, chinhu chekurangarira ndechekuti kana makambani achafa nekuda kwenzira nyowani yekushambadzira kana kuti ichakura kusvika kudenga. Vanhu vazhinji vanogona kunge vachinetseka kugamuchira iyo VR tekinoroji, zvisinei, nekufamba kwenguva ichave iri chikamu chakakosha chehupenyu hwedu, inodhura zvakare.
Uyewo Verenga: Kuwedzera Kwechokwadi Vs. Chokwadi Chaichoicho: Misiyano Mikuru
Zvevhidhiyo, isu tinongoda kamera ine yakanaka megapixel uye isu takanaka kuenda. Asi, VR iri kure neizvi, a kugadzira kambani inoda huwandu hwakawanda kuti uenderere mberi nekuvhurwa kwenyika yekutaurirana.
Mushandisi haazi muoni izvozvi sezvo VR yave chiitiko. Iyi imwe inoita kuti VR irambe ichimirira ramangwana asi iwe unofanirwa kuzvinzwisisa kana uchida kuishandisa nemazvo. Pachave neshanduko zhinji mukushambadzira uye nehupenyu hwega wega mugore rinouya zvekuti kunogona kupunzika kwemakambani mazhinji. Nekudaro, zvakakosha kuti utore tekinoroji iyi nekukurumidza sezvazvinogona kana iwe uchida kugara uchimhanya.
Zvakare, vanhu vari kutaurirana vanofanirwa kufarira tekinoroji nyowani uye vanofanirwa kuvhura pfungwa kuti vagamuchire maturusi eVR. Iyo inovhura nzira nyowani yezviitiko nechombo chakasimba zvakadaro patinogona icho chinogona kukwanisa kumutsa edu emanzwiro uye edu pachedu manzwiro kubva kune vanogona kuve vateereri.
Uyewo Verenga: 5 Zvikonzero zvekusarudza Virtual Reality yeBranding
VR inzira inoita kuti vanhu vanzwe, vafunge uye vapindure kune zvekufungidzira zvinoonekwa. Hapana mubvunzo kuti ino inguva yeselfie asi vanhu vachiri kuda kuva nechimwe chinhu kuburikidza chavanogona kutaura kwavari padanho remunhu. Ichi chishuwo chimwe chinogona zvirokwazvo kuchinja nzira yekutaurirana nemunhu wese. Vateereri vanozokwanisa kuenda kune chero nzvimbo chero nguva chero sekuda kwako.
Sezvambotaurwa pamusoro apa, MR, AR, uye VR hazvirevi kune chinhu chimwe chete. Ichapararira kumatunhu mazhinji uye kunyangwe padanho rega, ichaita basa rakakosha. Izvi zvese zvinogona kuvhundutsa vanhu vazhinji asi kune vamwe, inzira yezvimwe zviitiko zvitsva zvinovaendesa kune imwe nhanho nemikana mitsva. Zvisinei, pachave nekusava nechokwadi asi chinhu chitsva chose chinoda nguva yekutorwa.
Unoda kuwana chigadzirwa chakagadzirwa kutenderedza inonyudza tech? Wobva wasvika kwatiri kuti ubvunze.
Mabhenefiti Echokwadi Chaicho Muindasitiri Dhizaini
Oct 4 | Virtual Reality, chaiyo chaiyo maapplication